Muxuu Bogba ka yiri warka sheegaya inuu ka fariisanayo ciyaaraha Xulka Faransiiska? | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Muxuu Bogba ka yiri warka sheegaya inuu ka fariisanayo ciyaaraha Xulka Faransiiska?
(Manchester) 26 Okt 2020 – Laacibka Paul Pogba ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya inuu ka fariisanayo ciyaaraha caalamiga ah ee uu ku metelo Xulka Faransiiska isagoo ka ashtakoonaya MW Emmanuel Macron oo Islaamka ku tilmaamay ”isha argagixisada.”
Warar badan oo ka imanayey dhanka Bariga Dhexe, ayaa qorarey in jookarka Manchester United oo Muslim ihi uu ka fariisanayo ciyaaraha xulkiisa kaddib warkii muranka dhaliyey ee uu Macron Jimcihii sheegay.
Yeelkeede, Sportsmail ayaa qoraya in Pogba aanu dhankaa u soconin oo uu usii dheelayo Xulka Buluuglayaasha.
Pogba ayaa Instagram kusoo qoray in wararkaasi aanay ”waxba ka jirin” isla markaana uu la yaabay, ka caroodey kana xumaaday”, isagoo ku tilmaamay ”warbixin aan la aqbali karin.”
Previous articleDEG DEG: ”Yaan la iibsanin alaabooyinkooda’ – MW Erdogan oo soo jeediyey in la qaaddaco badeecada Faransiiska
Next articleDHEGEYSO: Cillado hor taagan qaxooti Somalia ku sugan oo helay ogolaanshaha Sweden